Dzisina Kurongwa Dzemotokari Chitima muAustralia - RayHaber
mushaRailwayIntercity Railway SystemsUnmanned Freight Train Exits Kubva kuAustralia
Unmanned Freight Train Exits Kubva kuAustralia
21 / 09 / 2018 Levent Ozen Intercity Railway Systems, THE WORLD, Railway, GENERAL, OCEANIA 0
unmanned yuk chitima chinotasva kuAustralia
Nzira isina kutenderwa yekutakura iyo yakaderera muDevonport, Tasmania, Australia, yakaderedzwa uye dambudziko rinogona kudzivirirwa.
Maererano mashoko akataurwa Tasmanian mapurisa, kudzora uye usingagoni kumiswa nokubvisa unmanned mitoro chitima derailed Port of Devonport hako zvichibvira njodzi Pedyo pamberi chinja raanotaura.
Cement akagadza zvichiratidza kuti inenge 50? Km paawa chitima akaenda Police Inspector Stuart Wilkinson, akati kuti mashoko Kusaona ngozi kuruzhinji mumaminitsi wandei kuzarura sirens pakati zvikwata mapurisa.
Ç Zviri pachena kuti nguva yaive yakakosha, Wilkinson akati. Ichitima chakanga chiri kuenda kuDevonport uye zvakanga zvakakodzera kuzivisa vagari vemo kuti chitima chaiva kutungamira munharaunda iyoyo. Zvinosuruvarisa, mumwe mukadzi aifamba achidzika mumugwagwa kubva kune zvidimbu akawira pamusoro pemakumbo akati vakadzi vaviri vakakuvara.
Freight Train Dzidzira Off Rail Line 30 / 01 / 2014 Freight Train Off-Rail Rail Line MuAdanada Railroad Transportation Yakavharwa: Pamusana pokurairirwa kwechitima chekutakura pedyo neKaraisalı District of Adana, gwairi rakavhara. Pamusana pokudengenyeka kwechitima chekutakura pedyo neKaraisalı District of Adana, chitima chacho chakavhara. Vashambadziri ve600 pavatyairi vengarava pachitima chimwe chete, Pozanti Railway Station yakatumirwa kuAdana nemotokari dzakasiyana-siyana. Panyaya ye13.00, ngoro yechitima chekutakura, iyo iri paPozantı-Yenice motokari, yakaderedzwa muBucak Village yeKaraisalı District. Hapana akaurayiwa kana kukuvadzwa muchiitiko chacho. Kunyange zvazvo mudziyo uri pamativi emotokari wakanyengedzwa, motokari yacho yakavharwa kuti iende
Chitima chekutengesa chakakanganiswa muKars 29 / 07 / 2014 MuKars, motokari yekutakura yakaderera: muSarıkamış district, ngoro ye3, iyo yakaderedza chitima chekutakura, yakagumburwa. Maererano nemashoko akawanikwa, ngoro ye3 yechitima chekutakura kubva Erzurum kusvika kuKars yakaderedzwa muAcısu nzvimbo nokuda kwechikonzero chisingatauri. Kukuvadza kunokonzerwa nokuvhara ngoro ye 3 neyimbi uye simbi. Erzurum-Kars motokari yemugwagwa nemhaka yengozi yakavharwa. Basa rakatangwa kuti rigadzirisezve nzira. Parizvino, kufamba kweAnkara-Kars pakati peEnglish Express nekuda kwechiitiko muErzurum, vatakuri vakatamira kune Kars vakaziva kuti bhazi.
Motokari yemotokari yemotokari yakadzika 22 / 12 / 2014 Ngarava yekutakura mota yakazara mota yakasvibisa: Motokari mbiri dzemotokari yekutakura inotakura mazimbe kubva ku Divriği District of Sivas kuenda kuAskale District yeErzurum yakaderedzwa. Apo njodzi yacho haina kukuvadzwa, chitima chacho charega kumira. Chiitiko chacho chakaitika ku01.30 mapeji epurovhinzi ye İliç, Erzincan, pedyo neBağıştaş Station. Ngoro mbiri dzeC45326 dzakaputika 12, iyo yakanga iri pasi pekutungamirirwa kweinjiniya İlyas Aslan kubva ku Divriği District yeSivas Province, akatakura mazimbe kumusha weAsskale muEruzurm. Apo chitima chacho chinomira pakati peErzurum naErzincan vakamira nekuda kwengozi, basa rakatanga kuzarura mugwagwa zvakare. Kune rumwe rutivi, nhamba yevatakuri veEastern Express inodhindwa munhamba yeIstanbul
Chitima chekutengesa chakakanganiswa muDüziçi (Vhidhiyo) 01 / 01 / 2016 Mitoro chitima derails mu düziçi: Düziçi kudunhu Osmaniye, 4 ngoro chakawa kubva isina mitoro chitima derailed. vakafira mutsaona kana kukuvara. Accident, zvichienderana County nezuro panguva 20.00 sezvo Akçakoyunlu Village Train Station Yarbaşı kwakaitika munharaunda Suspension Bridge. State Demiryoları Kuva 63059 rwendo No. mutekenyi Aaron 49-motokari mitoro chitima panguva birder kutarisira İslahiye Fevzi Pasha mirayiridzo kubva Iskenderun pakati Hatay dunhu apo dzengarava nenzira somugumisiro exiting motokari xnumx'ünc nokuda zvinokanganiswa mota 24 divi ngoro voisa penzira. Mushure chiitiko, akasimba 4 24 isina ngoro kuti Mamure chiteshi ngoro ...
Chitima chekutengesa chakasvibiswa muSivas 11 / 01 / 2016 mitoro chitima derailed çıktı.sivas Kangal kudunhu Sivas nokuda derailment ari mitoro chitima ngoro 3 zvisingagoni akapa zvokufambisa Sivas-Malatya njanji mutsetse. Maererano mashoko akapiwa, ruwa Malatya, Sivas, Divriği akatakura simbi 43303 3 yokutanga ngoro mutoro mune chitima, isingakwanisi chikonzero ndamira mumusha derailed apo. Kukuvadza kwemakumbo kwakaitika nekuda kwechiitiko chacho, Sivas-Malatya migwagwa yakavharwa nokuda kwekutakura. Basa rakatanga kutangazve
Gore negore, mukuru-kumhanya njanji kwemauto, European mutungamiri iri kukura Turkey. Kushambadzira mumigwagwa, iyo inotora ichi chichibva kubva kumatokisi akareba, inoramba ichiwedzera. Mukuwedzera, pamwe chete nemari yakagadzirwa yekufambisa muguta, nyeredzi dzemakambani edu akawanda achiita zviwanikwa zvekugadzira. Inofara kuti chitoro cheTurkey chepamusoro-chepamutambo che "nyika" chakatanga kutengeswa kuwedzera kune makambani anogadzira tende redzimba, motokari uye chiedza chezvitima. Isu tinofara zvikuru kuva mune iri tafura yekuzvikudza.
Web site Facebook Instagram Twitter Google+ iweTube LinkedIn
Nzira dzaSAMULAŞ dzeBhasikoro Dzakatanga
IMM kuchikoro chekuchengetedza
Yunifomu Yekupfeka Kusevenisira kweMainibus Yakatangwa muMalatya
Shanda anomhanya Street uye Avenue chitima Study Inopera muna Eskisehir
Mersin Metro Haingori Chekufambisa Chikoro
Kyiv Guta Administration Inodzidzisa Trajshchev Metro
GAZİULAŞ Vashandi Vachataura Nomutauro Wemasaini
MuItari, Ndege Inobata uye Inorembera Pane Waya WepaSimbi Lift
Trabzon Cable Mota Mota Yakatsemurwa?
Varidzi Vemotokari Kuteerera! .. Vhiki, 81 mudunhu, Radar Speed ​​Control ichaitwa
Era Idzva Ichatanga Nenjiyo dzeTitima muAegean Dunhu
Freight Train Dzidzira Off Rail Line
Chitima chekutengesa chakakanganiswa muKars
Motokari yemotokari yemotokari yakadzika
Chitima chekutengesa chakakanganiswa muDüziçi (Vhidhiyo)
Chitima chekutengesa chakasvibiswa muSivas
Tereji yefambisi yakashambadzira muZonguldak
Freight Train Inodzokorora Mutambo muJozgat
Freight Train mapera anobva kuElazığ
Chitima chekutakura chikepe chakanyura muMexico 5 chakafa